world history Archives - Page7of 29 - Thutazone
သမိုင်းတလျှောက် နာမည်ကျော် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြီးများ
Via : TechSpace နည်းပညာဂျာနယ် မီးတောင်များဟာ ကမ္ဘာ့ဖျက်ဆီးမှု အကြီးဆုံးသော အင်အားစုများအနက်တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဖျက်ဆီးမှုအကြီးမားဆုံးသော ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ၊ သူတို့ရဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေရှိနိုင်မလား ? ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းတလျှောက် ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိခဲ့တဲ့ မီးတောင်များကို လေ့လာစမ်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့… ...
နာဇီတို့နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ကြသော ဂျူးသစ္စာဖောက်များ
ရေးသားသူ - ကောင်းစည်သူ (သုတစွယ်စုံ) ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက သမိုင်းမှတ်တမ်းဆိုးဝင်ခဲ့သည့် နာဇီများ၏ ဂျူးလူမျိုးများအားအမြစ်ပြတ်သုတ်သင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် နာဇီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများကို အများက ဂျူးလူမျိုးများဖြစ်မည်ဟု မယူဆခဲ့ကြချေ။ဂျူးများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် အသတ်ခံခဲ့ရသည့် ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွင် ဂျာမာန်များသည်သာ တာဝန်အရှိဆုံးဟု တွေးမိတတ်ကြသည်။ ထိုစဉ်က ...
ရှေးဟောင်းဂရိနိုင်ငံ၏ အစောပိုင်းကာလတွင် မြို့ပြနိုင်ငံငယ်လေးများသည် နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်မှုအားနည်းသေးသည်ဟုဆိုရမည်။ မြို့ပြနိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူများကို Poleis ဟုခေါ်ကြပြီး လူနည်းစုကိုယ်စားပြုသည့် အုပ်ချုပ်သူများ လည်းဖြစ်ကြသည်။ ဂရိခေတ်အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်အတန်းတွင် ဒီမိုကရေစီသဘောတရား အထွန်းကားဆုံး မြို့ပြနိုင်ငံ နှစ်ခုမှာ အေသင် (Athens) နှင့် စပါတာ(Sparta) ...
သမိုင်းတလျှောက် အိန္ဒိယ-ပါကစ္စတန် ၂နိုင်ငံကြားက စစ်ပွဲများ
7 Day Daily ဂျာနယ် ၊ အတွဲ(၁၇)၊ အမှတ်(၅၁) မှ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်တို့ရဲ့ စစ်ရေး တင်းမာမှုဟာ အခုသီတင်းပတ်အတွင်း စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေထိ တရိပ်ရိပ် မြင့်တက်လာပါတယ်။ အာရှ တောင်ပိုင်း ဒေသက ...
ရှေးဂရိရဲ့ အထင်ကရ ပညာကျော် (၇)ဦး
လူသားတွေရဲ့အတွေးအခေါ် ၊အယူအဆတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီးဟာအဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲလာရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတလျှောက်မှာ ဂရိနိုင်ငံက အထင်ကရ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ပေါင်းများစွာပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီး မျက်မှောက်ခေတ်ကာလအထိ လူသား တွေစံနမူနာထား မှတ်သားရမဲ့ အတွေးအခေါ်၊စိတ်ကူးစိတ်သန်းများစွာကို ချန်ထားခဲ့ ကြပါတယ်။ ဂရိက အတွေးအခေါ်ပညာရှင်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဆိုခရေးတီး ၊ ...
ရှေးခေတ်ရောမနိုင်ငံ ကောင်းစားစဉ်က ယခုခေတ်မျက်စိနှင့်ကြည့်လျှင် လူ့ယဉ်ကျေးမှု နှင့် များစွာ ဖီလာဖြစ်သော ဓားရေး ၊ လှံရေး ယှဉ်ပြိုင်ကစားခြင်းသည် ထွန်းကားခဲ့သည်။ ထိုကစားပွဲများမှာ လူကို အသေသတ်၍ အနိုင်ယူရသော ကစားပွဲများဖြစ်သည်။ ဘုရင်နှင့် တကွ မှူးကြီးမတ်ရာ သေနာပတိများ ၊ ...
Page7of 29 Prev 1 …67 8 … 29 Next